के छ भारतीय अभिनेत्री शर्माले आत्महत्या गर्नुअघि लेखेको सुसाइड नोटमा ?
दैनिक अनलाइन | माघ ११, २०७६ शनिबार | 0
नयाँदिल्ली । भारतीय टेलिभिजनकी कलाकार सेजल शर्माले आत्महत्या गरेकी छन्। उनले शुक्रबार घरमा एक सुसाइड नोट लेखेर आत्महत्या गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
शर्मा स्टार प्लसको सिरियल ‘दिल तो ह्याप्पी हे जी’मा अन्तिम पटक देखिएकी थिइन्। सिरियालमा सेजलले सिम्मी खोसलाको भूमिका निभाएकी थिइन, जो मुख्य पात्रको बहिनीको भूमिका हो।
सेजलले सिरियल अघि भीवो मोबाइल र उषा पंखाजस्ता ब्राण्डका विज्ञापनमा अभिनय गरिसकेकी छन्। भीवोका विज्ञापनमा उनी आमिर खानसँग देखिइएकी थिइन् भने उषा पंखाको विज्ञापनमा उनी किक्रेटर रोहित शर्मा र हार्दिक पाण्डेसँग देखिएकी थिइन्।
रुम पार्टनरसँग विवाद
काशीमिरा पुलिसले शर्माको आत्महत्याको केसलाई एक्सिडेन्टल केसका रुपमा दर्ता गरेको छ। प्रहरीले सेजलको आत्महत्याका बारेमा उनका दुई साथीसँग सोधपुछ गरेको छ। जसमध्ये एक सेजलकी रुममेट हुन्। सेजलले आत्महत्या गर्ने क्रममा उनका यी दुई साथी फ्याटमा उपस्थित थिए।
यस्तो पनि बताइएको छ की सेजलको उनकी रुम मेटका साथ कुनै कुरालाई लिएर विवाद भएको थियो। त्यसपछि उनले आफूलाई कोठमा बन्द गरेकी थिइन्। त्यसको केही समयपछि उनी मृत भेटिइन्।
के छ सुसाइट नोटमा ?
सेजलले आत्महत्या गर्नुअघि सुसाइट नोट पनि छोडेकी छिन्। उनले छोडेको सुसाइट नोटमा आफ्नो मृत्युको पछाडि कसैलाई पनि दोषी नठहराउन भनिएको छ। तर सेजल आफ्ना पिताको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण डिप्रेशनमा रहेको पनि बताइएको छ।
पुस ७, २०७६ सोमबार दैनिक अनलाइन
माघ १०, २०७६ शुक्रबार दैनिक अनलाइन